Thwebula Clownfish for Skype 4.40 Standard... – Vessoft
Thwebula Clownfish for Skype
Clownfish for Skype – isofthiwe ukuhumusha imiyalezo yombhalo gijimi ethandwa. Isofthiwe iqukethe kubahumushi ukuthi sithwale ukuhunyushwa imiyalezo angenayo naphumayo ngezilimi ezikhethiwe. Clownfish i-Skype isekela amasevisi translation kusuka ku-Google, Bing, Promt, Yandex, njll Isofthiwe umsebenzi ukushintsha izwi nemiphumela ehlukene umsindo. Clownfish i-Skype ikuvumela ukuba enze iposwe mass imiyalezo bese uxhuma bot ingxoxo ukuze aphendule imiyalezo engenayo. Futhi Clownfish i-Skype uyakwazi ukucabanga umbhalo olotshiwe nokuqopha izingxoxo.
Translations of the imiyalezo angenayo naphumayo
iposwe Mass of imiyalezo
Usakaza ukuguquka ngezwi
Ukubethela of imiyalezo
Amazwana on Clownfish for Skype:
Clownfish for Skype Ahlobene software:
English, Español, 中文, 日本語... KakaoTalk 2.5.3.1454
English, Français, Español, Deutsch... TeamSpeak 3.1.1 Client futhi 3.0.13.6 Server
Ewebhu Screen bamba Isofthiwe ukhonza ukusebenzisa imiphumela video, stereoscopic 3D ihluzo kanye netintfo animated phezu kwesithombe kusuka webcam.
PDF Isofthiwe yakhelwe ukudala PDF amafayela eliphezulu ngokusebenzisa iphrinta virtual ukuthi baxhumana yisiphi isicelo ehhovisi.
English, Українська, Français, Español... HyperCam 4.0.1511.06
English, Español, Deutsch, Português... WPS Office 10.1.0.5579